အမျိုးသမီးများအတွက် သတိပြုစရာ ==> (ဒီစာစောင်ကို မိန်းကလေးအားလုံးကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။) - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
ပင်မစာမျက်နာတရားတော်များ (DownLoad)သင့်စာမျက်နှာMMC - စည်းကမ်းချက်မြန်မာချစ်သူအဖွဲ့ ဝင်ဓါတ်ပုံများဗီဒီယို & သီချင်းများအဖွဲ့ (Group) များဘလောဂ့်များရသဟာသဗဟုသုတရသဆောင်းပါးဝတ္ထုတိုရင်ဖွင့်သံBlog Post တင်ရန်နေရာနည်းပညာ ပိုစ့်တင်ရန်နေရာကဗျာတင်ရန် - နေရာBlog Post စည်းကမ်းချက်ကဗျာများမြန်မာချစ်သူ-ကဗျာချစ်သူချစ်သူကဗျာဖိုရိမ် - ကဏ္ဍကြေငြာချက်များဆွေးနွေးကြမယ်...စာပေ နှင့် အားကစားအလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေးစာကြည့်တိုက်စာကြည့်တိုက်-၂နည်းပညာ စာကြည့်တိုက်သီချင်းများ♪ Mp3 သီချင်းများ ♫Flash သီချင်းများMp3 သီချင်းများ - ၁Mp3 သီချင်းများ - ၂Hip Hop သီချင်းများဖုန်း Ring Tones များMYMC - Family (Songs)ပရဟိတများပရဟိတအသင်း (မော်လမြိုင်)ပရဟိတအသင်း (ကယား)ပရဟိတအသင်း (ပြင်ဦးလွင်)ပရဟိတအသင်း (မလေးရှား)ပရဟိတအသင်း (ရန်ကုန်)ပရဟိတအသင်း ( မန္တလေး )ပရဟိတအသင်း ( ထိုင်း )သွေးအလှူရှင် အသင်းနည်းပညာသိပ္ပံ - နည်းပညာSoftware - နည်းပညာဘဏ်MMC - IT နည်းပညာဘဏ်Virus - နည်းပညာဘဏ်HACKER - နည်းပညာဘဏ်Gtalk ဆိုင်ရာနည်းပညာများFacebook နည်းပညာများနည်းပညာများMMC.Family Developersဆိုဒ်အသုံးပြုနည်းProfile Photo ချိန်းနည်းစာမျက်နှာ အလှပြင်နည်းလက်ဆောင်ပေးနည်းFlash သီချင်းတင်နည်းBlog Post တင်နည်းBlog Post ပြင်နည်းMMC မေးလ်များကန့်သတ်ရန်MMC မှမေးလ်များပိတ်နည်းComment မေးလ်ပိတ်နည်းဂိမ်းများလူငယ် - (Dota) အဖွဲ့ MMC TornCity Game အဖွဲ့ billiards gamezer အဖွဲ့ Admin'sတိုင်ကြားရန် - နေရာMMC ဆိုက်ဒ်အားအကြံပေးရန်မိသားစုချတ်ရွန်းချတ်ရွန်း - စည်းကမ်းချက်ဗီဒီယို - (Chat)
မြန်မာချစ်သူမိသားစု ဆိုဒ်မှ Mail များကန့် သတ်ရန်ဒီမှာဝင်ပါ။
အမျိုးသမီးများအတွက် သတိပြုစရာ ==> (ဒီစာစောင်ကို မိန်းကလေးအားလုံးကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။)
Posted by ချစ်ထွေး on September 22, 2012 at 1:00pm
ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးဖြစ်သူကို ခေါ်ပြီးပြောတာကနေ စကြရအောင်….
ဖခင်။ ။ အဖေသမီးကိုတစ်ခုပြမယ်.အရေးကြီးတယ်နော်.. ပြီးတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက တစ်စုံတစ်ခုကို အင်္ကျီအိပ်ထဲ
ကနှိက်ပြီး လက်ထဲဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတာသိချင်လားလို့သမီးဖြစ်သူကို မေးတယ်။ သမီးဖြစ်သူက
ခေါင်းညှိက်တဲ့အခါမှာတော့ ဒါဆို သမီး ထိုင်ထ ၁ခေါက်လုပ်.. သမီးဖြစ်သူက ထိုင်ထ လုပ်လဲပြီးရော ဖခင်ဖြစ်သူက
၃ ခေါက်လုပ်မှ ပြမယ်လို့ဆိုပြန်တယ်။ သမီးဖြစ်သူလုပ်လဲပြီးရော ၅ ခေါက်လုပ်မှပြမယ်လို့ဆိုပြန်တယ်။ သမီးဖြစ်သူ
ကလဲ၅ခေါက် လုပ်ပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက ၁၀ ခေါက်အထိ ဆိုလာပြန်တယ်။ ထိုအခါ သမီးဖြစ်သူက ၁၀
ခေါက်လုပ်ပြီးတော့..အဖေရယ် သမီးကိုဘာလဲဆိုတာသိအောင်ပြပါတော့လို့ဆိုတယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ ဖခင်ဖြစ်သူကလက်
ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားတာလေးကို ဖွင့်ပြလိုက်တော့ အကြွေတစ်မတ်စေ့ ဖြစ်နေတယ်။
အဲ့ဒီအကြွေစေ့လေးကိုပဲ လက်ထဲမှာနောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးတော့ သမီးဖြစ်သူကို ထိုင်ထ ၁၀ခေါက်
လုပ်ရင်ပြမယ်လို့ပြောတယ်။ သမီးဖြစ်သူက မတွေ့ချင်ပါဘူး.. သမီးတွေ့ပြီးပြီပဲဟာလို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ထိုအခါ
ဖခင်ဖြစ်သူက ၁ ခေါက်ပဲလုပ်ပါ သမီးရယ်.. အဖေပြပါ့မယ်လို့ ဆိုသတဲ့။ ၁ခေါက်လဲ မလုပ်နိုင်ဘူး..တွေ့ပြီးမြင်ပြီး
သားပဲဟာလို့ သမီးကပြန်ပြောသတဲ့။ ဒါဆို အလကားပဲပြမယ်သမီးရယ်..ကြည့်မလားလို့ဖခင်ကပြန်မေးတယ်။
အလကားလဲ မတွေ့ချင်ပါဘူး တွေ့ပြီးမြင်ပြီးသွားရင် ဘာတန်ဖိုးရှိတော့တာမှတ်လို့… ဆိုပြီး
အဲ့ဒီတော့မှ ဖခင်ဖြစ်သူက.. ဒီဥပမာလေးလိုပဲ သမီးရယ်....
မတွေ့ခင်မမြင်ခင်က တန်ဖိုးကြီးမားပြီးလိုသလို ခိုင်းလို့ရတဲ့ ဒီမတ်စေ့လေးဟာ တွေ့မြင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ တန်ဖိုး
မရှိတော့ဘူး မဟုတ်လား… "ဒီလိုပဲသမီးရေ..ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသင့်တဲ့ အရာတွေကိုလဲ အချိန်မတန်ခင်မှာ
တန်ဖိုးမဲ့သွားအောင် သူတစ်ပါးကို ပေးမမြင် ပေးမတွေ့သင့်ဘူး.." သမီးတို့ရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ကိုလဲ ဒီမတ်စေ့လေးလိုပဲ
အချိန်မတန်ခင် တန်ဖိုးမဲ့သွားအောင် သူတစ်ပါးကိုပေးမမြင် ပေးမတွေ့သင့်ဘူး။ ကဲ.ဒါဆို.. သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ မတ်စေ့
* တန်းဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိတယ်...တန်ဖိုးရှိမှ တန်ဖိုးထားတတ်မယ်။ * တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတော် လူကောင်း သူတော်ကောင်း
တွေဖြစ်ကြပါစေ....အားလုံးပဲ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ကောင်းကျိုး လိုအင်ဆန္ဒတွေ
♥♪♥ ...အခုခေတ်မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို ဦးတည်ပြီး ပြောတာထင်တယ်နော် ...
အမျိုးကောင်းသမီးများ ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် ........ ..
၀န်ခံချက် - ဖေ့ဘွတ်မှကူးယူထားသည် ကြည့်သူဦးရေ: 1895
Tags: ရသဆောင်းပါး Like 28 members like this
မှတ်ချက်လေး တစ်ခုဟာစာရေးသူအတွက် အားဆေးဖြစ်ပါတယ်
You need to beamember of ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥ to add comments!
Join ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
Comment by စိုးစိုး on January 1, 2013 at 12:45pm thank you
Comment by winter on October 2, 2012 at 7:04pm ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....မှတ်ထားပါ့မယ် Comment by ပါရမီ(မေတ္တာလေလှိုင်း) on October 2, 2012 at 11:54am ကောင်းတယ် အားပေးတယ် Comment by khinthitthitoo on October 2, 2012 at 10:48am မှတ်ထားပါ့မယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် Comment by အေးသီတာ on October 1, 2012 at 10:20pm ဥပမာလေးကောင်းတယ် Comment by Pyartho on October 1, 2012 at 5:02pm အရမ်းကိုကောင်းပါတယ် ။
Comment by ဖြိုးလေး on October 1, 2012 at 4:49pm တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်ရှင် မှတ်ထားပါ့မယ်နော် Comment by hsuhtet on October 1, 2012 at 10:28am ဟုတ်ကဲ့....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်.....
Comment by naymonepyae on September 30, 2012 at 2:36pm ကျေးဇူးပါ ခုလိုမျိုးလေးတွေရေးတင်တာဂုဏ်ယူပါတယ်နော် Comment by sann winn on September 29, 2012 at 9:21pm ဒီစာလေးကိုဖတ်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိဘတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက် မှတ်သားသိသင့်စရာပါပဲ။ဒီလိုမပြောတတ်မဆုံးမတတ်ခဲ့လို့ဘ၀ပျက်သွားခဲ့တာကိုယ်တွေ့ပါပဲ။မိန်းကလေးများအထူးသတိထားကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ ‹ နောက်သို့
Welcome to♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
အသစ်ဝင်မယ်or Sign In
တစ်ပတ်အတွင်း ထိပ်တန်းလှုပ်ရှားမှု့ အကောင်းဆုံး အဖွဲ့ဝင်များ..
2. snow myat
5. ချစ်၇အောင် (အညာသားလေး)
6. Chit Snow
8. Ko Nge
9. ★♥♪✞ထာဝရ✞♪♥ ★
လက်ဆောင်ပေးမယ် andrew mk
လက်ဆောင်ပေးမယ် arkar htet
လက်ဆောင်ပေးမယ် aung ko ko
လက်ဆောင်ပေးမယ် ChIt_y@_@Ung <R@$
လက်ဆောင်ပေးမယ် hlaing myo thant
လက်ဆောင်ပေးမယ် Hset Paing Htoo
လက်ဆောင်ပေးမယ် khen sian mung
လက်ဆောင်ပေးမယ် khin yadanar linn
created this Ning Network. © 2013 ရဲဂျာမှ မြန်မာချစ်သူမိသားစုကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည် Powered by
Profile photo တင်နည်းး
MMC မှ Mail များပိတ်ရန်
MMC မှMail များ ကန့်သတ်ရန်
Admin အဖွဲ့အား အကြံပေးရန်
ဖုန်း Ring Tones များ
အလှအပ နှင့် ဖက်ရှင်ဆိုင်ရာ
နည်းပညာ ကဏ္ဍ ၂
Flash Game များ
HIPHOP UNDERGROUND သီချင်းများ
Games 2000ကျော် ကစားရန်
MMC Developer Group
Software & နည်းပညာ Bank
MMC Donation Group